Mitambo yeParanormal: Iwo Matatu Madzimambo Tsika
musha	Horror Varaidzo Nhau	Mitambo yeParanormal: Iwo Matatu Madzimambo Tsika
by Waylon Jordan March 19, 2020 15,571 maonero
Welcome back for a brand new entry in Paranormal Games paHorror. Nhasi tine chimwe chinhu chakaipisisa kupfuura icho Cat muvare Game or Red Door, Yero Suo. Zvinodanwa Tsika dzeMadzimambo matatu, uye mutambo une mitemo yaunofanira kutevedzera kune iyo tsamba.
Kutendeseka, ndinosemesa kuidaidza kuti mutambo zvachose. Ichokwadi tsika sekureva kwezita. Sezvo nemitambo mizhinji seiyi, mavambo ayo akasviba zvakanyanya. Iwo ekutanga kutaurwa andinogona kuwana pairi aripo CreepyPasta mawebhusaiti uye Reddit.
Sechinyorwa cheparutivi, izvi hazvina chekuita nemuitiro wevoodoo wezita rimwe chete. Ndiwo akasiyana masimba esimba pamwe chete, asi zvimwe zvekushandisa zvaunoshandisa mukati me "mutambo" zvakare zvinonongedza kune yakasarudzika tsika.
Zvishandiso, Mitemo, uye Yambiro yekutamba Tsika dzeMadzimambo matatu
Iyi rondedzero yakareba uye ine chekuita uye iwe unoda yega yega chidimbu kuti utambe. Usasiya CHINHU CHINZE.
Imba hombe yakanyarara, kunyanya isina mahwindo. Kana iwe uchifanira kushandisa kamuri ine mahwindo, vharare iwo kuitira kuti pasave nechiedza chinobva kunze chingagone kupinda mukamuri. Imba yacho inofanira zvakare kuve nemusuwo unovhara uye unonamira zvakachengeteka.
Kenduru. Zvichida kenduru yakasimba yakasimba isingazotsva kana kutsva nekukurumidza
Chiedza. Iwe unofanirwa kubatidza kenduru, hongu
Bhagidhi diki remvura nemugaba wakachena kana mukombe
Magirazi maviri mahombe
Runhare rwakazara zvakazara
Mumwe waunovimba naye kuti vatevedze mitemo uye vatore mutambo zvakanyanyisa
Chinhu chidiki chinobata rudo kana kukosha kwako
Na11 manheru, iwe unofanirwa kutanga kumisikidza yako Matatu Madzimambo Tsika.
Munzvimbo yako yakasarudzwa nzvimbo imwe yemacheya ako akatarisana neNorth. Ichi ndicho chigaro chako choushe. Isa zvimwe zvigaro zviviri kune rumwe rutivi rweChigaro chakatarisa kwazviri. Macheya aya ndeeMambokadzi nebenzi uye anofanirwa kunge ari chinhambwe cheruoko kubva paChigaro.
Chengetedza girazi rimwe pachigaro cheMambokadzi uye rimwe paBenzi, zvakare rakatarisa kuChigaro. Ugere paChigaro, iwe unofanirwa kukwanisa kuona kuratidzwa kwako munzvimbo iri pedyo yechiono chako usingatendeuke utarise.
Isa bhaketi nemukombe kana mukombe wawakasarudza pamberi peChigaro nekukasira kusvika. Iwe unozvida padhuze zvakakwana kana iwe uchizozvida, asi kwete padyo zvekuti unogona kuzvigumbura.
Isa fan iri kuseri kweChigaro woitendeudzira, asi kwete kumusoro. Pakati nepakati kana pasi panofanira kukwana pazvinangwa zvetsika.
Dzima mwenje uye ubve mumba uchiona kuti musuwo unosiyiwa wakashama woenda kuimba yako yekurara.
Isa nharembozha yako, kenduru, uye chakareruka padyo nemubhedha kuitira kuti ugone kusvika pazviri zviri nyore pasina kuvhima. Kuti uve nechokwadi chekuti runhare rwazara zvakakwana, ndaingozoisiya pacharger. Seta alarm yako ye3: 30 am.
Tora chinhu chako chawakasarudza upinde mumubhedha. Yasvika nguva yekurara kugadzirira zvichauya.
Kuitisa Iwo Matatu Madzimambo Tsika
Kana wachi yako ichirira na3: 30 mangwanani, simuka pamubhedha, wobatidza kenduru, wobata foni yako. Chengetedza chinhu chako chendangariro newe nguva dzese.
Une maminitsi matatu kudzokera kukamuri rako rakagadzirirwa.
Paunopinda mumba, vhara musuwo shure kwako. Wako waunodanana naye mune ino tsika anofanira kumirira kunze chaiko kwekamuri uye kunyarara sezvinobvira.
Kuchengetedza mwenje wako wekenduru, tora nzvimbo yako paChigaro. Muviri wako unofanirwa kuvharidzira mhepo kubva kune feni iri kumashure kwako uye kuti irege kupisa kenduru. Pfungwa apa ndeyekuti, kana iwe ukasvetukira padivi panguva yako mumba, mwenje mwenje unozopepereswa kunze neiyo fan inopedzisa tsika.
UNOGONA, PASI PANE ZVIMWE ZVINHU, TARIRA ZVAKANANGIRA KUMAKOMASHURE PAMWE CHETE SIDE YAKO !! Zvakare, ita nepaunogona napo kuti usatarise zvakananga mumurazvo wemwenje.
Kufunga kuti wakazviisa pachigaro chako choushe na3: 33am uye zvese zvaenda maererano nezvakarongwa, iwe unogona ikozvino kutanga chikamu chinoshanda chetsika nekubvunza mubvunzo zvinonzwika. Zvinogona kutora nguva, asi zvakare, uchifungidzira kuti waita zvese nenzira kwayo, munguva pfupi iri kutevera uchabatana neMadzimambo anozopindura mibvunzo yako.
Zvinonzi iwe unonzwa manzwi avo, asi rangarira, zvisinei nekuvhunduka kana kusagadzikana kwazvingaite, usatendeuke kutarisa mumirazi.
Rangarira kutora izvi zvakanyanya. Ino haisi nguva yekubvunza mibvunzo yakapusa-- zvisinei nezvaungangonzwa kare, hongu ivo varipo. Une awa rimwe chete naMadzimambo rekubvunza chero chaunoda. Gadzirira mhinduro dzaungasafarire, uye gadzirira mibvunzo semhinduro kumibvunzo yako.
Chekupedzisira, usarega kenduru ichidzima panguva yako.
Na4: 34 am, shamwari yako iri kune rimwe divi remusuwo inofanira kukushevedzera kuti mutambo wapera. Ukasapindura, vanofanirwa kuedza kufona foni yako pachinzvimbo. Kana, uye chete kana, kana imwe yeidzi nzira ikabudirira mukuita kuti iwe utarise, ivo vanobva vapinda mukamuri kuti vaedze uye vakubvise iwe kubva mutsika nekudana zita rako, asi havafanire kunge vari pasi pechero mamiriro ezvinhu kukubata iwe. Uye pakupedzisira, kana izvo zvikasashanda, ivo vanofanirwa kushandisa iyo muggi kukanda mvura kubva mubhaketi muchiso chako.
Kana iwe ukazviwana iwe uri mune semi-kuziva nyika uye inguva yekudzoka, tarisa pane chako chinhu chawakauya nacho iwe uye chirega icho chikutungamire iwe kudzokera kune inomuka mamiriro. Zvinogona kunzwika kupusa kwauri, asi kana iwe wakazvipira kune iyo tsika, kusvika zvino, saka hazvisi izvo zvakakura kutambanudza kwekufungidzira.
Kana uchingoziva iwe kuti nguva yemutambo yakwana, iwe unofanirwa kusimuka, kuridza kenduru uye kusiya mukamuri kuratidza kuvhara.
Kana iwe ukasamuka pa3: 30am, usaenderere mberi.
Kana iwe ukadzokera kukamuri rako rakagadzirirwa kuti uwane musuwo wakavharwa, usaenderere mberi uye uchisiya imba uchienda nemunhu wese. Usadzoke pamberi pa6: 00 am.
Kana fan iri yakadzimwa kana kusisiri kushanda neimwe nzira, usaramba uchienderera uye uchisiya imba uchitora wese munhu wauinaye. Usadzoke pamberi pa6: 00 am.
Usarega kenduru rako richidzima tsika isati yapera.
Zvakare, sezvakataurwa pamusoro apa, usatarisa chero nguva mumirazi mbiri. Zvinonzi izvo izvo zvaunoona ipapo zvinogona kukwevera kuziva kwako mukati uye iwe unogona kubatwa neMadzimambo.
Usasiye Chigaro chako cheushe pamberi pa4: 34 am.
Usapinda mune ino tsika yekuita jongwe kana kusaremekedza. Hazvizopere zvakanaka kwauri kana kune wako tsika tsika.
Pamitambo yese yatakafukidza mune dzino zvakateedzana kusvika parizvino, iyi ndiyo, nekure, ine njodzi zvakanyanya sezvo ichinyatsoita zvetsika zvinhu uye inofungidzirwa kuti inodana mweya. Izvo zvinhu zvakasarudzika padivi, iwe uri kubatawo pane mwenje wakabatidzwa kweawa imwe saka pane njodzi yekutsva futi.
Ita shuwa kuti ichi chinhu chaunonyatsoda kuita usati watora iyo Tsika dzeMadzimambo matatu.